Weerar ismiidaamin ah oo gowr dhow lagu qaaday Xarun Turkiga ay ku leedahay Muqdisho.
Waxaa gowr dhow qarax xoogan lala eegtay Xarun weyn oo ay la haayen Turkiga oo ku taalla Agagaarka Xarumaha Dowladda gaar ahaan Dugsiga Banaadir inta u dhexeyso Lamber Afar iyo Tarbuunka.
Qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ahaa Ismiidaamin gaari ah, waxa uuna ka dhacay Dugsiga Banaadir inta u dhexeyso Lamber Afar iyo Tarbuunka, wallow aan wax faahfaahin ah laga heynin qaabka uu qaraxa u dhacay.
Waxaa la maqlaaya Rasaas oo ay kor u ridayaan Ciiddamadda Dowladda Somalia, waxaana la sheegaya in xarunta ay gudaha usii galeen Ciiddamo ka tirsan Alshabaab wallow aan la Ogeyn tiradooda.
Aqri magacyada askar fara badan oo lagu filiyay dil toogasho ah kadib xukun maxkamada Meleterigu ay ku riday.
Ragga la toogtay ayaa waxa ay kala ahaayeen Cali Maxamed Aadan, Cismaan Maxamed Diiriye, Ibraahin Maxamed Xuseen iyo Xasan Maxamuud Abuukar sida ay shaaciyeen saraakiisha maxkamada oo ka hadlay goobta uu falka toogashada ka dhacayay oo aheyd halka dowladu ku fuliso dilalka ee ah Iskool Booloosiyo
Saddex kamid ah askarta maanta lagu toogtay xukunka maxkamadeed ayaa waxa lagu helay dilka askari ka tirsanaa ciidanka dowladda gaar ahaan guutada ilaalada madaxtooyada kaas oo ay rasaas wadareed ku fureen
Askariga kale ayaa oo ahaa Ex Dable Xasan Maxamuud Abuukar ayaa isna lagu helay in uu dilay 29-kii bishii 5-aad 2012-kii C/laahi Maxamed Xuseen oo uu ku khaarijiyay Degmada Kaaraan ee Gobalka Banaadir.
Waa markii ugu horeysay ee taariikhda dhaw maxkamada meleteriga Soomaaliya ay afar askari isku waqti ku fuliso dil toogasha ah.
War Deg Deg Ah Qarax loo adeegsaday Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay oo goordhaw ka dhacay Muqdisho.
Gaarigan qarxay ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay hal ruux shan kalana dhaawac ayaa kasoo gaaray sida ay wada xaqiijiyeen gudoomiyayaasha degmooyinka Yaakhshiid iyo kaaraan oo goobta saxaafada kula hadlay kadib qaraxa.
goob joogayaal ayaa ku waramay in gaariga qarxay oo ahaa gaari yar oo nuuca raaxada in uu ka dagtay nin watay kadibna daqiiqado yar kadib uu gaarigaasi qarxay.
Dadka wax ku noqday weerarka Sanca ka dhacay ee gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday ayaa waxaa la sheegay in ay dhamaan shacab ahaayeen lamana sheegin wali cid loo qabtay ku lug lahaanshaha weerarkaasi hasa yeeshee wariyaal goobta gaaray ayaa waxa ay ku warameen in uu jiro baaritaan ciidamada amaanku ay halkaasi ka sameeyeen kadib markii uu qaruxu dhacay.
Daawo Sawirada Faroole oo sheegaya inay uga qayb galayaan shirka New-Deal ee Brussels ka furmaya magaca Maamulka Puntland .
Cabdi Raxmaan maxamed Madaxamuud (Faroole) Hogaamiyaha Maamulka Puntiland ayaa maanta waxa uu daaha ka rogay in maamulkiisu shirka Bilguim-ka ay uga qeyb gali doonaan magacooda ka dib kulan maanta uu la qaatay wafdi ka socda Midowga Yurub oo uu hogaaminayay Agaasimaha guud Afrika ee u qaabishan Midawga Yurub ninka lagu magacaabo Nick Westcott.
Faroole waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jirto baahi wayn oo u baahan tageero caalami ah sida dhismaha kaabayaashaa dhaqalaaha iyo horumarinta adeegyada bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashadu hormuud ka yihiin arintaas oo uu sheegay in ka sheegi doonaa madasha shirka marka uu furmo.
Nick Westcott waxa uu tilmaamay inay ka wada hadleen Puntland mashaariicda horumarineed ,amaanka iyo tababarka ciidamada iyo baahida ay soo gudbiyeen.
Hadalka Faroole ee ah in ay shirka New Deal uga qeyb gelayaan iyaga oo wata magacooda ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya uu cadeeyay sida looga qeyb gelayo kulanka Brussels.
Sheekh Xasan Daahir Aweys uma Xirna Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud (Talow yuu u xiran yahay
Hogaamiye diimeedka Xasan Daahir Aweys ayaa mudo bil ka badan ku jira gacan aaney Soomaalidu sida ay tahay ugu warheyn ,xili uu isagu isku soo dhiibay gacanta dowlada curdunka ah ee madaxweyne Xasan Shiikh .
In uu isku soo dhiibo dhanka dowlada ma,aheyn qorshaha Mr Aweys laakiin danta ayaase sidaas usheegtay markii maamulka ka taliya deeganada uu ka soo jeedo ee Ahlu Sunna ay si wada jir ah ugu gacan seereen in Xasan Daahir uu saldhigto Dhuusamareeb ama Gurigceel midood .
Dowlada Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ma aaney fileyn in Xasan Daahir uu isku soo dhiibi doono ,laakiin diidmadii Ahlu Sunna ayaa keentay in Xasan rag ay isku heyb yihiin ay wada hadal la furan taliska madaxeyne Xasan Shiikh oo ugu dambeyn sameeyay balan qaad uusan ogaan Karin sida uu usuurtoobi karo.
Imtaatinkii Xasan Daahir ee Muqdisho waxaa uu abuuray jawi su,aalo badan kadib marki wiilasha Alfa Group ay jirdil kula kaceen duqey Soomaaliyeed .
Laakiin ma is weydiisay waa kuwee Alfa Group?
Waa ciidan ku labisan dhar maasgarati ah, waa Somalia, waxaana ay toos u hoostagan waaxda la dagalanka arga gixisada ee Bariga Africa waana mushaari ee ma,ahan sida ciidamada dowlada Somalia oo marna qada marna hela, ku darso waxaa ay fuliyaan howl galada gaarka ah ee ay uxil saaraan sirdoonka Mareykanka ee jooga Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo amarkiisa ?
iikeena Xasan Daahir Aweys waxaa uu ahaa amarkii Madaxweyne Xasan Shiikh laakiin waa oraah aan afka dhaafi Karin oo aan siyaado wadan maxaa yeelay madaxweynaha Somalia oo dowladiisa loo lulay calan cad, wali waxba isuguma toosna.
Madaxweyne Xasan Sheekh ma uusan laheyn amarkii lagu jidrilay odayasha mana uusan xitaa awoodin in uu hor istaago maxa yeelay dowladiisa ayaa magan u ah aduunka u dagaalku kala dhaxeeyo Al qaacidada.
Xasan Shiikh waa ay ku aadkaatay in uu garab siiyo nin ka mid ahaa xag jirinta Somalia mudo dheer ,laakiin xitaa hadii uu isku dayo in uu Somaalinimo wax ku dabaro dowladiisa ayaa ku taageero beeli karta meeshaas.
Saxaafada ayaa buun buunisay in madaxweynuhu uu hor taagan yahay in la sii daayo Xasan Daahir laakiin xaqiiqda Xasan Shiikh oo aan aheyn hogaamiye milatari arintan kumalahan door weyn , sidoo kale saraaskiisha Soomaalidu kuma lahan door ka badan ninkan ii xaree ama ii soo bixi.
Dadka ka faalooda siyaasada ayaa aaminsan in Xasan Shiikh uu jeclaan lahaa in dowladiisu ay si nabad ah ku dhameyso colaado Somalia taas oo loo arko wado hadal lala galo mucaaradka isi soo dhiba sida Xasan Daahir oo kale ama kuwa wali xabada wada.
Wariyaasha aragtida dheer ayaa dareemi kara in Xasan Shiikh Maxamuud uu ugu dambeyn cadeyn doono xaalada Xasan Daahir Aweys laakiin waa markii ay ka soo dhameystaan dadka uu gacanta ugu jiro oo ah waxaad la dagalanka aragagixisada .
Xasan Shiikh Maxmuud iyo dowladiisa ugubka ah oo laga hago xaga amaanka ,dhaqaalaha , iyo istiraatiijiyada, malahan go,aanka qaabka loola macaamilaayo hogaamiyasha Al Shabab oo ay reer galbeedku kula dagalamayan Somalia.
Xasan Daahir, caawimaadka Habar-gidir iyo sirta ay ka heli karaan reer Galbeedka ?
Mr Aweys waa hogaamiye mayal adag ,dadka dabeecadiisa yaqaanahine waxaa ay ku micneeyaan nin jacel in tiisa lagu raaco .
Waa korneel ka tirsanaan jiray ciidanka xooga dalka Somalia,waana nin in ka badan rubac qarni ku soo jiray dagaalo xaga diinta ah.
Wey ku adag tahay Mr Aweys in uu dulmi ku tilmaamo wixii uu soo waday mudadaas ,laakiin waa ay ufudud dahay in uu intaa ku hakiyo musalsalkii colaada uu jilayay.
Reer Galbeedka ayaa wado walba umari doona in ay Xasan Daahir ka helaan sir ku saabsan Al Shabab ,laakiin dadka ka faalooda arimaha Al Shabab ayaa aaminsan in uusan Xasan Daahir heynin xog badan oo ku saabsan Al Shabab madama uusan waligii ku biirin madaxda sar sare ee Al Shabaab.
Waxaa uu ka dhashay mid ka mid ah qabaa’ilada ugu tirada badan Soomaalida ,laakiin 3-dii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraa doorka ay beesha Habar-gidir kulaheed Al Shabab taas ayaana loo arkaa in ay hoos udhigi doonto taageero buuxda oo ka timada beeshiisa.
Si walbaba dowlada Somalia, taageerayasha Mr Aweys ,inta reer ahaan uu u xanuun jinaayo ,Soomaalida aaminsan in uu dhib gaarsiyay iyo dadka u dhuun daloola arimaha Somalia ayaa sugaya go,aanka ugu dambeeyay ee laga gaaro arinta Xasan Daahir Aweys.
Al-Shabaab oo Shaacisay tirada weerarada ay fuliyeen Bisha Ramadaan iyo Qaababka ay weeraradaasi u fuliyeen.
Afhayeenka Dhinaca Howlgalada Kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Bariga, Bartamaha iyo Kofurta Soomaaliya, Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab, ayaa waxa uu u sheegay war-baahinta kooxda uu afhayeenka u yahay tirada weerarro nuucya kala duwan oo ay geesteen intii lagu guda jiray bishaan Ramadaan ee kala barka Mareysa.
“Waxa aan ku qaadnay Cadawga intii bishaan Barakeysan ay socotay 108 weerar oo kala nuuc ah. 57 weeraradaasi kamid ah waxa ay ahaayeen miinooyin iyo Banbooyin lala eegtay kolonyada Cadawga iyo askar, 41 kamid ah waxa ay ahaayeen weeraro xeryaha cadawga lagu qaaday iyo kuwa dhaba gal ah, Sagaal weerar oo kalana waxa ay ahaayeen dilal qorsheysan oo saraakiisha Cadawga lalaa eegtay mid kamid ahna waxa uu ahaa Camliyo Istishhaadiya ah”, Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa ku waramay.
Hadalka Cabdi Cabsi Casiis ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo waayihii danbe ay Shabaabku kordhiyeen weerarada kadhan ah saraakiisha dowlada iyo ciidamada Shisheeye waxa uuna balan qaaday in ay sii wadi doonaan inta ay socoto bishaan Barakeysan.
Waxa uu intaa raaciyay in suura galida weerarada tirada badan ee bishaan ay fuliyeen ay daliiil u tahay awooda Shabaab oo wali sideedi ah iyo tabar darra ku timid waxa uu ugu yeeray cadawga.
Maalin kahor waxa ay Shabaab sheegteen in Madaxii Sirdoonka Mareykanka e Bariga Afrika uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar Shabaabku ay ku qaadeen gaadiid uu lasocday oo Muqdisho marayay bilaawgii bishaan Ramadaan inkasta oo aysan wali jirn cid ka madax banaan Shabaabka oo xaqiijisay geeridiisa.
Madaxwayne Xasan Shiikh oo 3-Qodob kaga faaido & wanaag batay Madaxwaynayaashii dalka soo maray (Akhri 3-Qodob oo muhiim ah)
Madaxweeynayaashii soo maray dalka Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku kala duwan yihiin arimo badan oo wax tar u leh dhanka bulshada iyo horumarka dalka.
Madaxwayne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa Madaxweeynayaashii ugu dambeeyay ee soo mara dalka Somalia waxa uu kaga duwan yahay 3-Qodob oo aad muhiim u ah kuwaas oo kala ah .
1-Shaqaalaha Dowlada, Ciidamada Amniga, Wasiirada Qaranka, Laamaha Nabadsugida, Xoogsatada Dekada Caalamiga ah iyo garoonka Diyaaradaha iyo Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir dhamaan waxeey si caadi ah oo laab laab leheen u qaataan Bil kasta Mushaaraadkooda.
2- Ciidamada qaaska ah ee tababaran ee ilaaliya Madaxwayne Xasan Shiikh Maxamuud waxeey ka soo kala jeedaan lagana soo xulay Qabiilo fara badan oo guud ahaan dalka Somalia dega waxaana aad ugu yar ciidamada Beeshiisa si aanan loogu shabadeeyn.
3- Maxaabiista Xabsiga dhexe ku jirta raashinkooda iyo xuquuqdooda ma waayaan waxaana si deg deg ah lagu sii daayaa cid alaale iyo cidii dambi lagu waayo oo ay Nabadsugida soo xiraan.
Qodobadaan muhiimka ah ee uu Madaxwayne Xasan Shiikh Maxamuud kaga wanaag-sanaaday madaxdii hore waxaa loo badinayaa inuu horay u ogaa halka laga heestay Madaxweeynayaashii isaga ka horeeyay kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan arinkaan kala kulmi jiray.
Madaxweeynayaashii hore ayaa xili kasta waxaa ka gadoodi jiray mushaar la´aan awgeed ciidamo fara badan iyo Shaqaalaha Dowlada waxaana sidoo kale Istaaf ama waardiye qaas ah u noqon jiray Maleeshiyaad ay isku Jufo hoose yihiin.
Sidoo kale Madaxweeynayaashii hore ayaa inta badan waxba ka qaban jirin Maxaabiis aad u badneeyd oo aanan dambiyo galin kuwaas oo Xabsiyada iskaga xirnaan jiray iyaga oo waxba galabsan ama lagu qaldayo dad kale oo falal amni daro ah ku kacay.
Gudoomiyaha gudiga maaliyada Baarlamaanka Federalka Soomaaliya, Xildhibaan Shiikh Adan Maxamed Madeer, ayaa la sheegay in uu lahaa gaariga lagu qarxiyay gudaha Suuqa X/weyne barqanimadii maanta.
Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in gaariga ay ka degeen Xildhibaan Shiikh Adan Maxamed Madeer iyo xaaskiisa xilligii qaraxu dhacayay hasa yeeshe uu ku jiray ruux iyaga la socday kaas oo dhaawac kasoo gaaray qaraxa.
Gudoomiyaha Degmada Qaraxu ka dhacay, Cabdullahi Sahal Ger-dhuub, ayaa waxa uu sheegay in ay aaminsanyihiin in qaraxaasi uu ahaa mid horay gaariga loogu soo rakibay ama bac walxaha qarxa lagu soo guray oo ladhigay agagaarka gaariga maadaama meesha lagu qarxiyay aysan aheyn goob god wax lagu aaso laga qodi karo.
Cabdullahi Sahal Ger-dhuub, gudoomiyaha degmada X/weyne ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan qaraxa si tafaasiil dheeraad ah ay uga helaan.
Xildhibaan Shiikh Adan Maxamed Madeer wali kama hadlin weerarka lagu qaaday iyo sida uu uga bad-baaday, waxaana goob joogayaashu sheegeen in durba markii qaruxu dhacay uuna arkay gaarihiisa oo gubanaya in uu isaga tegay goobta.
Qarxaasi inta la’ogyahay waxaa ku dhintay hal ruux 7-ba kalana dhawac ayaa kasoo gaaray kuwaas oo dhamaan la sheegayo in ay shacab ahaayeen.